အညာဒေသမှမန်းမြေဆီသို့ (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Travel » အညာဒေသမှမန်းမြေဆီသို့ (၁)
Posted by Shar Thet Man on Nov 8, 2017 in Travel |4comments
ဒီတစ်ခေါက်သွားခဲ့ရတဲ့ခရီးစဉ်လေးကတော့ မုံရွာကနေ မန္တလေး ကိုသွားခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်လေးပါ။
ရုံးကနေ Fam Trip ခရီးစဉ်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။
ရန်ကုန် ကနေ မုံရွာထိ high way express ကားနဲ့ပဲသွားခဲ့ကြပါတယ်..Lumbiniနဲ့လေ..VIPကားဆိုငြိမ့်ပြီးအေးဆေးလိုက်သွားရုံပဲ။ (ကားလက်မှတ်
လည်းမှာလို့ရတယ်နော် :P) ညကားဆိုတော့ (၇)နာရီလောက်ထွက်ပြီး မုံရွာကိုမနက်(၇)နာရီကျော်ကျော်လောက်ရောက်သွားပါတယ်။
မုံရွာမှာတည်းစရာဟိုတယ်တွေတော်တော်များလာတာတွေ့ရပါတယ်. မွန်လေးတို့ကတော့ Win Unity Resort မှာပဲတည်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဘန်ဂလို
လေးတွေရှိသလို Building တွေလည်းရှိပါတယ်။ ဟိုတယ်မှာအထုပ်တွေချပြီးတာနဲ့ မွန်လေးတို့ လည်ပတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုစကြတာပေ့ါ။
မုံရွာမြို့ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဖက် ချင်းတွင်းမြစ် အရှေ့ဖက်ကမ်းမှာ တည်ရှိပါတယ်..မြို့လေးက အမှိုက်တွေရှင်းပီး သပ်ရပ်နေတယ်..လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေနဲ့ကတော့ ကားတွေထက် ဆိုင်ကယ်အသုံးများပါတယ်….
King & Queen ဟိုတယ်နဲ့ Jade Royal ဟိုတယ်လေး၂လုံးလည်းရှိပါသေးတယ်။
ဖိုလ်ဝင်တောင် ကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၄၁၁ တွင်တည်ခဲ့ပါတယ်၊ ယခုချိန်တွင်နှစ်ပေါင်း ၉၀၀ ကျော်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သောရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် တောင်
ဖြစ်ပါသည်။ဘုရားဆင်းတုရုပ်ပွား တော် ပေါင်း လေးသောင်းကျော်ရှိပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်ရပ်များလည်းရှိ ပါတယ်။ ဖိုလ်ဝင်တောင် ဘုရားစေတီ များ အတွင်းတွင် ရှေးလက်ရာနံရံဆေး ရေး ပန်းချီများ၊ပန်းပု လက်ရာများအပြင် သစ်သား တံခါးများ တွင်လည်း ရှေးလက်ရာပန်းပုများကို အလှဆင်၍ ချယ်မှုန်း ထုလုပ် ထားသည် ကို တွေ့ရှိ နိုင်ပါတယ်။ ယင်းမာပင် မြို့နှင့် (၇)မိုင် ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပြီး
ဖိုလ်ဝင်တာင်ရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ဖိုလ်ဝင်တောင် ဘုရားပွဲကာလ အတွင်း မျောက်များ လုံးဝပျောက်ကွယ် သွားတတ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဘုရားပွဲ ပြီးလျှင် ပြန်ပေါ်လာ တတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ “ဖိုလ်ဝင်တောင်ရှင်မ” က ဖွက်ထားသည် ဟု ဒေသခံ များက ယူဆ ယုံကြည် ကြပါတယ်တဲ့။
ဖိုလ်ဝင်တောင် ဘုရား ပွဲတော်ကို နှစ်စဉ် တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း (၈)ရက်မှ လပြည့်နေ့အထိ စည်ကား သိုက်မြိုက်စွား ကျင်းပကြပြီး
မျောက်တွေပေါသလားမမေးနဲ့ ဒါပေမဲ့ လိမ်မာကြတယ်
ဖိုလ်ဝင်တောင်ထဲမှာတွေ့ခဲ့ရသောဘုရားများ ဂူထဲဝင်လိုက်တာ အေးနေတာပဲ
ဖိုလ်ဝင်တောင် နဲ့နီးနီးလေးပါပဲ။ ကျောက်တောင်ကြီးက ပန်းထိမ်ဆရာကြီးဦးရွှေဘတစ်ဦးတည်းက အခုလိုဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ခဲ့တာတဲ့…..
နာမည်ကြီးဘုရားတွေပေါတဲ့မြို့မုန်လာဥကိုခါကြက်ဥလို့ ခေါ်တဲ့မြို့သနပ်ခါးကြိုက်တဲ့မြို့ဖုန်ထူတဲ့မြို့ချိန်းတွေ့ စရာပန်းခြံမရှိတဲ့ မြို့#ကိုယ့်လိုအချောတွေသွားလည်တဲ့မြို့ 
သိပ်လှတဲ့ရွှေဘတောင်….ဦးရွှေဘ ကောင်းကောင်းဆောက်လို့ မပြီးခင်မှာသေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့အတွက်…နှမြောစရာပါ
ရွှေဘတောင်နဲ့ မွန်လေး (ချစ်စရာလမ်းကြားလေးထဲမှာ)
မြန်မာပြည်ရှိ ပတ္တမြားမျက်ရှင် ကိန်းတော်မူရာ ကျောက္ကာ ရွှေဂူနီဘုရားလို့လည်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသေးတယ်။ မုံရွာမြို့ အရှေ့ စူးစူး(၈)မိုင်ခန့်အကွာ
သက္ကရာဇ်၂၂၆ခုသီရိဓမ္မာ အာသောကမင်းကြီး ရှစ်သောင်း လေးထောင် သော စေတီများတည်စဉ် ကာလ ကတည်းက ယခုကျောက္ကာ မြောက်ရွာရဲ့ နောက်ဘက် မြေပြန့်မှာ ထင်ရှားသော ကျောက်သံမြို့ ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ် . ၄င်းမြို့ရဲ့ ရှေကဘက် သဲဖြူချောင်းအနီးမှာ အသောက ကျောင်းနဲ့ အသောက စေတီတော် ဆိုတာ ရှိခဲ့ပါတယ် ..ဒါဟာ ရွှေဂူနီဘုရား ရဲ့ မူလ အစ ဖြစ်ပါတယ်.. သက္ကရာဇ် ၃၆၀ခုမှာ အသောကနွယ် မောရိယ မင်းဆက် ပျက်သုံးချိန်မှာ ကျောက်သံမြို့ ကြီးလည်း ပျက်စီး စေတီတော်ကြီးလဲ သဲဖြူသောင်ကမ်းပါး ပြိုဖုံး လွှမ်းပြီး တောင်ကုန်း အဖြစ်ကို ရောက်ခဲ့ရပါတယ် ..
ကျောက်သံမြို့ ပျက်ကြီးရဲ့ အရှေ့မြောက်အရပ်မှာ ကျောက္ကာရွာကြီးကို တည်ထောင်ခဲ့ကြ တယ်လို့ ဆိုပါတယ် .. သက္ကရာဇ် ၇၆၂ မှာတော့ အင်းဝ မင်းဆက် (၄)ဆက်မြောက် ဘုရင်မင်းခေါင်ကြီး လက်ထက်မှာ ကျောက္ကာ ရွာဟာ အုပ်စုပဓာန ရွာကြီးအဖြစ်ကို ရောက်ခဲ့ပြီး ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိတစ်ဦး ခန့်ထားခဲ့ပါတယ် ..
အဲသည် အုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိကဘဲ ဦးဆောင်ပြီး မြေစိုင်ခဲတွေ ခြုံနွယ်တွေကို ရှင်းလင်းပြီး အသောကဘုရားကို ရှင်းလင်းပြီး ကုလားကျောင်း တိုက်ခံ တ၀လိုဏ်ဂူဖြင့် စေတီတည်ခဲ့ပြီး ရွှေဂူဘုရား လို့ ဘွဲ့တော်ချီခဲ့ပါတယ်..
သက္ကရာဇ် ၈၈၈ မှ ၉၅၅ အတွင်း သာသနာ ညှိုးနွမ်းချိန်မှာတော့ ရွှေဂူဘုရား ဟာလဲ ပြိုပျက်ပြီး တောင်ကုန်း အဖြစ်ကို ရောက်ရှိခဲ့ရပါတယ် ..
သက္ကရာဇ် ၉၈၈ သာလွန်မင်းတရားကြီး လက်ထက်မှာတော့ ကျောက်က္ကာရွာက နွားကျောင်းသား မောင်ဆုအောင် ကို သိကြားမင်းက ပူးကပ်ပြီး အံ့ဘွယ်စကား ပြောကြားလို့ တောခြုံအတွင်းက သီရိဓမ္မာ သောကမင်း စေတီဟောင်းကို ဆရာတော်ဘုရားများနဲ့ရပ်ရွာလူကြီးတွေ ရှေကမှောက်မှာ မှန်ကန်စွာ ညွှန်ပြနိုင်တဲ့ သတင်းဟာ သာလွန်မင်း တရားကြီး နားတော်သို့ ပေါက်ကြားတော်မူပြီး ဆုလာဘ် များစွာ ချီးမြှင့် တာကို ခံရပါတယ်..
ဒါ့ပြင် ရွှေဂူနီစေတီတော်ကို ၀တ္ထုကမြေ သတ်မှတ်လှူဒါန်းခြင်း၊ မဟာရံ တံတိုင်းပြုလုပ် စေခြင်း၊ စေလွှတ်အပ်သော မှူးမတ်တို့ရဲ့ ဆင်တော် တုပ်ဝပ်ပြီး ရွှေဂူနီစေတီကို ပူဇော်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ ဆင်ဖြူတော်ရုပ်ထု လုပ်စေခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်စေခဲ့ပါတယ် ။
သက္ကရာဇ် ၉၉၉ ခုမှာ ကျောက္ကာရွာသူ ရွာသားများဟာ ဆရာတော် ရှင်ဥာဏမဉ္ဇူ အမှူးပြုပြီး အသောက စေတီငယ်ကို ဌာပနာပြီး ဥာဏ်တော်မြှင့်ကာ တည်ခဲ့တာဖြင့် (၁၀၀၀)ခုနှစ်မှာ ပြီး ခဲ့ပါတယ် .. လိုဏ်ဂူရဲ့ နံရံကို ဟင်္သာပြဒါးဆေးနဲ့ ရေးခြယ်လို့ ရွှေဂူနီလို့ ဘွဲ့တော် ချီကြောင်း မှတ်သားရပါတယ်
(၁) နတ်တို့သနင်း သိကြားမင်းသည် ဆင်းကာဖော်ပြ အသောက၏ မူလစေတီ အခြေတည်í ဂူနီဘုရားပေါ်ထင်ရှား ထူးခြားအံ့ဘွယ်တော် ။
(၂) မြောက်သို့တူရူမျက်နှာမူí ရွှေဂူနှစ်ဆင့် လွန်ထူးတင့် ဘုန်းပွင့်အံ့ဘွယ် တော် ။
(၃)သာလွန်မင်းတရား မှူးမတ်များတို့ ဘုရားထံတော် ရောက်လာသော်မူ ဆင်တော်ဝပ်လျှိုး ဦးနှိမ်ကျိုး တန်ခိုးအံ့ဘွယ်တော် ။
(၄) သိဒ္ဓိသွင်းသော် အင်းနှင့်ဆေးဝါး မန္တရားလည်း စွမ်းအားတန်ခိုးရှိ သိဒ္ဓိအံ့ဘွယ်တော်။
(၅) နေ့စဉ်အမြဲ ပူဇော်ပွဲနှင့် လှူမြဲဒါနဖူးလာကြ ထာဝရအံ့ဖွယ်တော် ။
(၆) ကောင်းမှုပြုကာ ဆုပန်ထွာသော် လိုရာဆုပေါင်းပြည့် စုံကြောင်း ဂုဏ်ပေါင်း အံ့ဘွယ်တော် ။
(၇)ဗုဒ္ဓဓာတ်တော် ကိန်းဝပ်ပျော်သဖြင့် ကျောင်းတော် စေတီကြိမ်ကြိမ်တည် ထူလည်း အံ့ဘွယ်တော် ။
(၈)ရုပ်ပွားတော်အား သဒ္ဒါပွား အများလှူဒါန်း ရွှေသင်္ကန်းကြောင့် ရောင်လျှမ်း ထိန်ညီး ရွှေတုံးကြီး အပြီးအံ့ဘွယ်တော် ။
(၉) သစ္စာအဓိဌာန် ကျောက်ချီပြန်သော် ဂုဏ်လျှုံမြတ်ဖျား တန်ခိုး အားကြောင့် ထင်ရှားတိတိ ဧကန်သိ ရှိဘိအံ့ဘွယ်တော် ..။
မုံရွာမြို့ ရဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ယွန်းထည်လုပ်ငန်းရှိရာအိမ်ကိုလည်းမွန်လေးတို့ဝင်ရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အချိန်ရှိတယ်ဆိုရင် ၀င်ရောက်လည်ပတ်လေ့
ရွှေဂူနီဘုရားရှေ့ မျက်နှာစာမှဈေးသည်များနှင့် ဖြတ်လျှောက်မွန်လေးတစ်ယောက်
ရွှေဂူနီဘုရားနားမှာ ကလေးတို့အတွက်ကစားစရာလေးတွေ လေယာဉ်ပျံ၊ငှက်၊အိမ်၊သင်္ဘော
ရွှေဂူနီဘုရားနားမှာ ကလေးတို့အတွက်ကစားစရာလေးတွေ လေယာဉ်ပျံ
မုံရွာမြို့ရဲ့တောင်အရပ်မှာရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရပ်တော်မူဘုရားကြီး တည်ရှိရာ မဟာဗောဓိတစ်ထောင်ဘုရားကို လည်းဖူးဖြစ်ခဲ့တယ်။
(ဘုရားစောင်းတန်းတစ်လျောက် ရောင်းချနေတဲ့ အထည်တွေ ပစ္စည်းတွေအားလုံးက ၀ယ်ချင်စရာတွေချည်းပါဘဲ)…
ဆင်းတုတော်တွေအများဆုံးရှိနေတဲ့ မိုးညှင်းသဗ္ဗုဒ္ဓေဘုရားကြီးကို ဖူးမြော်ဖို့အတွက် ခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်…လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းမို့ပါ….
သမ္ဗုဒ္ဓေစေတီတော်ကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၀၁ ခုနှစ် (ခရစ်နှစ်၁၉၃၈ ခုနှစ်) ဒုတိယ၀ါဆိုလဆန်း(၅)ရက်နေ့ ကြာသပတေးနေ့တွင် မိုးညှင်းဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင် ရွှေအုတ်ချပ် ကိုင်ကာ အုတ်မြစ်ချ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သော စေတီတော်ဖြစ်ပါတယ်။
မိုးညှင်းဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင် ပုံစံပေးပြီး လက်တွေ့ပုံစံတည်ဆောက်သူ ဗိသုကာပညာရှင်မှာ အမြင့်မြိုံမှ ဆရာဟံကြီး ဖြစ်ပြီး တည်ဆောက်ကာလမှာ ဆယ်နှစ်ကြာပါတယ်။
“ဥသြဥ ဟုခေါ် ဘိနပ်တော် “ အရ ဘိနိပ်ခုံတော် စတုရန်း ၁၁၁ တောင်စီ ရှိပါတယ်။ ဥာဏ်တော် ဘိနပ်ခုံတော်မှ အထိ (၈၈)တောင်ရှိပြီး ထိုစေတီနှင့်ဆက်လျှက်ရှိသော စောင်းတန်းတော်မှာ (တဇောင်း) အလျှား ဘိုးတော် အရ အလျှားတော် (၅၇)တောင် ရှိရ်ျ နံတော်ကြီးအရ အနံ (၅၇)တောင်ရှိပါတယ်။
စေတီတော်ကြီး နှင့် တကွ စောင်းတန်း အာရုံခံ တို့အပေါ်ရှိ စေတီရံပေါင်း မှ ရှင်းသောင်းလင်း အရ ၈၆၄ ဆူရှိပါတယ်။
ပထမ ဂါထာ တော်အရ ရုပ်ပွားပေါင်း ၅၁၂၀၂၈ ဆူရှိရမည် ဖြစ်သော်လည်း ဒုတိယ ဂါထာ တော်အရ ဂင်္ဂါ ၀ါလုသဲစုမက ပွင့်တော်မူပြီးသော ဘုရား ရှင်တို့ ကို ရည်စူးပိုထား ပါတယ်။ ထို့ ကြောင့် မြရွှေငွေ စိန်သီးဆောင်း ရုပ်ပွားပေါင်း အရ ရုပ်ပွားတော် ပေါင်းမှ အတွင်းအပြင် ၅၈၂၃၆၃ ဆူရှိပါတယ်.
လေးဆယ် နှင့် နှစ် တံခါးလှစ် တက် ဖြစ်သည်မှာ နှစ်ဆယ့် နှစ်သာ အရ တံခါးပေါက် တက်ရန် ဆင်းရန် တံခါးပေါက် ၂၂ ပေါက် ရှိ၍ ရိုးရိုးတံခါးပေါက် ၂၀ရှိသည်။
ကောင်းမှုတော်ဘုရားသည် စစ်ကိုင်း၏ အကျော်ကြားဆုံး အနက်တဆူဖြစ်၍ စစ်ကိုင်းမြို့ မြောက်ဘက် (၆) မိုင်ခန့်အကွာ၌ တည်ရှိပြီး ဘွဲ့အမည်မှာ ရာဇမဏိစူဠာ ဖြစ်ပါတယ်။။ မြန်မာသက္ကရာဇ် (၉၉၈) ခုနှစ် ၊ ခရစ်နှစ် (၁၆၃၆) ၊ တော်သလင်းလဆန်း (၁၀) ရက် ၊ တနင်္လာနေ့တွင် သတိုးဓမ္မရာဇာ ဘွဲ့ခံ သာလွန်မင်းတရားကြီး တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တာပါ။
ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဘုရင့်နောင်မင်းတရားကြီး၏ မြေးဖြစ်သူ သာလွန်မင်း တရားကြီးဟာ နောင်တော် အနောက်ဖက်လွန်မင်း နတ်ရွာစံ ကံတော်ကုန်သည်နှင့် တပြိုင်နက် အဖိုးလက် ထက်မှ စစ်တိုက်ခြင်းကြောင့် ရရှိလာတဲ့ တိုင်းပြည်နစ်နာမှုတွေကို သိရှိတာကြောင့် စစ်ကို သိပ်မုန်းတီးခဲ့ သူဆိုရင် မမှားပါဘူး၊ ဒါကြောင့်လဲ တိုင်းပြည်ကို စီးပွားရေးဖြင့်သာ သာယာဝပြော စည်ပင်အောင် လုပ်မယ် လို့ သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပြီး စစ်တိုက်ဖို့၊ စစ်အင်အား စုဆောင်းဖို့ ကုန်ကျမည့်စရိတ် များ ကို ပြည်သူတွေ စီးပွားဖြစ်ထွန်းအောင်သာ ကြိုးစားခဲ့တာပါ၊
သူ့ရည်ရွယ်ချက်က တိုင်းပြည်စည်ပင်ဝပြောပြီး အေးချမ်းနေလျင် စစ်မက်အင်အားလဲ အလိုလို ပါပြီးသားဖြစ်သည်၊ တကူးတက စုဆောင်းစရာ မလိုဟု ယူဆခဲ့ဟန်ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်လဲ သာသနာတော်ကို ကြည်ညိုသည့်အလျောက် မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာ့သမိုင်းတွင် ထင်ရှားခဲ့သော တောင်ဖီလာ ဆရာတော်၏ အမိန့်ကို နာခံကာ သာသနာတော်အရေး၊ ဘာသာရေး၊ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး စသည်ကို အဖက်ဖက်မှ တိုးတက်အောင် စီမံအုပ်ချုပ်တော်မူခဲ့တယ်၊ တိုင်းပြည်ကို သာယာဝပြောအောင် စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့လို့လည်း သာလွန်မင်းတရားကြီး လို့ ပြည်သူပြည်သားများက ချစ်ခင်မြတ်နိုးခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတယ်။
တိုင်းပြည်အတွင်းသာ မကပဲ အိမ်နီးချင်း အိန္ဒိယ၊ သီဟိုရ် (သီရိလင်္ကာ )နိုင်ငံများနှင့်လည်း စီးပွားရေးအရ အများအပြား ဆက်ဆံကာ တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာကောဇာသက္ကရာဇ် ( ၉၉၁ ) ခုနှစ်တွင် နန်းတက်တော်မူသော မင်းတရားကြီးဟာ ကောင်းမှုတော်စေတီကြီးကို တည်ဆောက်ဆဲ မှာပင် ကံမကောင်းစွာ နတ်ရွာစံကံတော်ကုန်ခဲ့တယ်။ ဆက်လက်၍ မပြီး ပြတ်သေးတဲ့ စေတီတော်ကြီးကို သားတော်မင်းက ဆက်လက် တည်ထားကာ ထီးတော်တင် လှူနိုင်ခဲ့တယ်။။
သရေခေတ္တရာပြည် ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီး၏ ကောင်းမူတော်ဖြစ်သော စေတီ( ၆) ဆူတို့တွင် (၁)ဆူ အပါအဝင် ဖြစ်သော သရမာစေတီကို ပုံတူယူကာ ကောင်းမူတော်စေတီ (ရာဇမဏိစူဠာ) အဖြစ်တည်ထားတော်မူခဲ့တယ်။ ။ အဝန်းအတောင် (၃၀၀) အမြင့်အတောင်(၃၀၀) တည်ထားတော်မူခဲ့ပြီး စေတီ၏ လေးဘက်လေးတန်တွင်ကျောင်းတိုက် (၄)တိုက်ကို လည်း ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့တယ်။ အရှေ့ဘက်ကျောင်းကို ပုဗ္ဗ၀န်ကျောင်း၊ မြောက်ဘက်ကျောင်းကို ဥတ္တရ၀န် ကျောင်း၊ အနောက် ဖက်က ကျောင်းကို ပစ္ဆိမာရုံကျောင်း၊ တောင်ဘက်က ကျောင်းကို ဒက္ခိဏ၀န် ကျောင်း၊ ဟုမှည့်ခေါ်ခဲ့ တာ ယနေ့ခေတ် တွင်တော့ ကျောင်းနေရာများ အုတ်ရိုးဟောင်းနေရာ များစွာကို တွေ့ရှိနိုင်သေးတယ်။။
သို့သော် ကောဇာသက္ကရာဇ် (၉၉၆)၊သာသနာသက္ကရာဇ် (၂၁၇၈)ခုနှစ်တွင် သာလွန်မင်းတရားကြီးသည် စေတီတော်ကြီး ကိုထီးမတင်ရသေးဘဲနတ်ရွာစံခဲ့ကြောင်းကို ဘုရားဖြူဆရာတော် အရှင်ရာဇိန္ဒ ရေးသားသော သာသန ဗဟုဿုတ ပကာသနီကျမ်းတွင် လေ့လာရဖူးပါတယ်။
နောက်တချက်အနေဖြင့် မိမိလက်ထက်တွင် သာသနာရေးအရ အမြဲတမ်း အဆက်သွယ်ရှိခဲ့သော သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံမှ စေတီတော်ပုံစံများကို အတုယူသည်ဟုလည်း သိရတယ်။ အဘယ်ေကြာင့်ဆို သီရိလင်္ကာတနိုင်ငံလုံးမှာယနေ့ခေတ်အထိတည်ရှိနေကြသော စေတီတော်မှန်သမျှ
ကောင်းမှုတော် ပုံစံချည်းသာ ဖြစ်တယ်။၊ စေတီအားလုံးကို ထုံးဖြူဖြူဖြင့်သာ ပူဇော် လေ့ရှိကြတယ်။်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာလို ရွှေသင်္ကန်း ကပ်သည်ဟူ၍ လုံးဝမရှိပါ၊ အဖြူရောင် ထုံးသင်္ကန်းသည် စင်ကြယ် ဖြူစင်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။။
အဘိုးဖြစ်သူ ဘုရင့်နောင်မင်းတရားကြီး လက်ထက်ကတည်းက သီဟိုရ်ကျွန်း( ယနေ့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ Sri lanka ) မှ ပင့်ဆောင် လာခဲ့တဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ လက်ဝဲဘက် အောက်စွယ်တော် အံတော်ပွားကို တောင်ငူတွင် ဋ္ဌာပနာထား ပူဇော် ထားရာမှ ရန်သူတို့၏ ရန်ကို ကြောက်သောကြောင့် မိမိနန်းစိုက်ရာ အင်းဝမြို့တော်နှင့် အနီးတွင် ပူဇော်ထားရှိလိုရကား ယနေ့ စစ်ကိုင်းမြို့တွင် ပြောင်းေ ရွှ့ပူဇော်ထားသည်ဟု ဆိုပါတယ်။၊
ဘုရားရှင်၏ အံတော်စွယ်တော်ဟ်ာဆွတ်ဆွတ် အဖြူရောင်ဖြစ်လို့ ထိုသို့ ရည်ရွယ်တော်မူကာ ထုံးသင်္ကန်း ဖွေးဖွေးကိုသာ ကပ်လှူခဲ့တယ်လို့ လည်း သိရပါတယ်။ ကောင်းမှုတော် စေတီတော်ကြီးကို လူပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ဖြင့် နှစ်ပေါင်း ( ၁၂ )နှစ်ကြာအောင် တည်ဆောက်ခဲ့ရတာပါ။။
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးမှာ ဘုရားစေတီ ပေါများသလို ကျောင်း၊ကန် အဆောက်အဦးတို့လည်း များပြားလှပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၊ ငဖားတောင်ထွဋ်တွင် တည်ရှိပါတယ်။ ပုညအမတ်၏ ကောင်းမှုတော်ဖြစ်ပြီး ဓာတ်တော်မွေတော် ၂ဆူကို ဌာပနာထားပါတယ်။ ဆွမ်းဦးပုညရှင်စေတီထဲတွင် စေတီငယ်၂ဆူ ရှိပြီး တစ်ဆူမှာ သီရိဓမ္မာသောကမင်း ကောင်းမှုတော်စေတီဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ဆူမှာ ပတူးသင်္ဃရာဇာ၏ ကောင်းမှုတော်စေတီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုညအမတ်သည် စေတီတည်စဉ်က စစ်ကိုင်းမြို့တည် အသင်္ခယာစောယွမ်းအား မလျှောက်တင်ခဲ့ပေ။ အသင်္ခယာစောယွမ်းသည် မင်းမာန်ဖြင့် အမျက်ထွက်သဖြင့် ပုညအမတ်နှင့် ဓာတ်တော်များကို သယ်ယူလာခဲ့သော ငစိန်သင်ကို ရေချကွပ်မျက်စေပါတယ်။ မြစ်ရေသည် လူကို မလွှမ်းသွားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သာ ဝိုင်းဝန်းလို့နေတယ်။ ထို့မှသာ အသင်္ခယာစောယွမ်းလည်း အမျက်ပြေပြီး လွတ်ငြိမ်းခွင့် ပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့။ ထို့နောက်စေတီကို ဆက်လက်တည်ရာ သက္ကရာဇ် ၆၈၄ခုတွင် ပြီးစီးခဲ့
ပါတယ်။ ဆွမ်းဦးပုညရှင်ဟု အမည်တွင်ရခြင်းမှာ လူတို့သည် ဆွမ်းဦးကပ်လှူရန် မည်မျှပင် ကြိုးစားစေကာမူ
မအောင်မြင်ဘဲ တောစောင့်နတ်၊ တောင်စောင့်နတ်တို့က ဦးစွာ ဆွမ်းဦးကို ကပ်လှူသွားကြသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
မုံရွာပြန်လက်ဆောင်ဝယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် သနပ်ခါး၊ Indiaပစ္စည်းတွေ (ဆာရီ)၊ မြေပဲဆားလှော်၊ ဇီးထန်းလျက်၊၀က်အူတောင့်တို့ဆို နာမည်ကြီးဘဲ…Indiaပစ္စည်းတွေဆို စစ်လည်းစစ်တယ် ဈေးလည်းအရမ်းတန်ချင်ရင် လကမ္ဘာတို့ ၀င်းကမ္ဘာဆိုင်တို့မှာ သွားကြည့်ပြီးဝယ်လို့
ဒီနာမည်ကြီးဘုရားတွေက မုံရွာမြို့တွင်းကနေသွားမယ်ဆို ကားအတော်အသင့်တော့မောင်းရတယ်…ရာသီဥတုကလည်း ပူပြင်းတာကြောင့် ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားတာထက် ကားနဲ့သွားတာက ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်
ညနေ နေ၀င်ချိန်နီးအခါဆိုရင်တော ရွှေတောင်ဦးဘုရားမှာ ချင်းတွင်းမြစ်ရှုခင်းနဲ့Sunsetကိုကြည့်လို့ရတယ်…
#စားကြမယ် သောက်ကြမယ် ♨
ဆုထမင်းဆိုင်၊ ရှင်းသန့်ထမင်းဆိုင်နဲ့ တစ်ရက်ကတော့ Win Unity Hotel နားက ရွှေလိမ္မော်ဆိုင်မှာစားခဲ့ကြပါတယ်။
အညာဒေသမှဆီမန်းမြေဆီသို့ (၂) ကိုလည်းဆက်လက်ဖတ်ရှုပေးပါနော်..မန်းလေးကိုလည်ပတ်ခဲ့တာလေးဆက်ရေးပေးပါမယ်။
Shar Thet Man has written 235 post in this Website..
ဖတ်ရတာ ဗဟုသုတ ရပါတယ်
အညာဒေသမှာ ဖိုလ်ဝင်တောင် ရွှေဘတောင် မရောက်ဖူးသေးဘူး
ခုလိုမျိုး စာလေးတွေနဲ့ ပုံလေးတွေ ပါတဲ့ ခရီးသွားဆောင်းပါးတွေ ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားပါတယ်
ဒီခေါက်တော့ ရောက်အောင်သွားမယ် မွန်လေးရေ